लुम्बिनीको पुस १४ गते एजीएम, सभामा के प्रस्ताब लादै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » लुम्बिनीको पुस १४ गते एजीएम, सभामा के प्रस्ताब लादै ?
काठमाडौं - पुस १४ गते लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्सले वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । सभामा इन्सुरेन्सले १२.८२% बोनस सेयर र त्यसको साथमा कर तिर्न ०.६७% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पेस गर्दैछ । त्यसैले गर्दा लुम्बिनीले मंसिर २९ गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । लगानीकर्ताले लाभांश प्राप्त गर्नको लागि मंसिर २८ गते भित्रमा सेयरधनी बनिसक्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले हालै बिक्री भएको १००% हकप्रदपछि कायम हुने ७८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको १२.८२% बोनस र ०.६७% नगद दिने घोषणा गरेको हो । यो बोनस दिइसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा लुम्बिनी जनरलले ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ८४ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १६३ रुपैयाँ ५९ पैसा छ ।